R/wasaare Gaas & waftigiisa oo dalka ku soo laabtay, soona gutay waajibaadka Xajka. – Radio Daljir
Muqdisho, Nov 13 ? R/wasaaraha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya iyo mas?uuliyiin ka tirsan hay?adaha kala duwan ee dawladda ayaa maanta lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaraha ee magaalada Muqdisho kaddib markii muddo labo todobaad ah ay safar dalka dibaddiisa ah ku maqnaayeen.
R/wasaare Prof. Cabdiweli Maxamed Cali ?Gaas? iyo madaxda dawladdiisa ee uu hoggaamiyey ayaa safarkooda maqnaansho ay ugu mug-weynayd mid ay ku joogeen dalka boqortooyada Sacuudiga, gaar ahaanna gudashada waajibaadka Xajka oo ay dhawaan u ambabaxeen isaga iyo Xujay kale oo federaalka ah, kana socday labada gole ee baarlamaanka iyo xukuumadda.
Md. Gaas, oo hadal kooban war-baahinta ku siiyey garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in u ku faraxsan yahay sida nabadgalyo ee ay ku guteen waajibaadkii alle, isagoo dhinaca kale xusay intii ay ku guda jireen baydka alle ee barakaysan in ay u soo duceeyeen ummadda Soomaaliyeed oo muddada dheer ay ragaadiyeen colaaddo iyo dhibaatooyinka dawlad la?aaneed.